La qaboojinta canabka xilliga dayrta | December 2019
Ugu Weyn Ee La qaboojinta canabka xilliga dayrta
Faaqidaada xilliga dayrta: ilaalinta beergooyka mustaqbalka
Midkeen kastaaba wuxuu dhadhamiyey canab, qaar ka mid ahna way jecel yihiin wax badan oo ay go'aansadeen inay koraan. Laakiin canab koraya waa qayb ka mid ah shaqada. Ka dib markii goosashada, waxaad u baahan tahay inaad waraabiyo duurka canab, yeelmaha kabtiisa ciidda iyaga ka hooseeya dalbo bacriminta. Iyo si loo ilaaliyo canab ka soo cudurada, dayrta waxay geedaha geedka canabka ah ka shaqeynayaan diyaarinta kiimikada.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © La qaboojinta canabka xilliga dayrta 2019